Tuesday March 05, 2019 - 11:49:00 in Wararka by Super Admin
Ururka Al Qaacida ee ka dagaalama wadamada Maqribul Islaami ayaa beeniyey hadal kasoo yeeray dowlada Faransiiska oo lagu sheegay in la dilay mid kamid ah culimada jihaadka ee ugu caansan mandiqadaha Saxaraha iyo Saaxilka Afrika,
Al Qaacidda ayaa baahisay Muuqaal Video ah oo uu kasoo muuqanayay Hoggaamiyahaan Jihaadiga ah wuxuuna ahaa wareysi gaar ah oo lala yeeshay .
Wasaaradda Gaashaandhigga Faransiiskan ayaa Afar bilood ka hor sheegtay in ay howlgal ka dhacay Maali ay ku dishay Sheikh Moxamed Kufa oo kamid ah Mas'uuliyinta Jamacada Jihadiga ah ee Nusratul Islam Wal Muslimin, horeyna u ahaan jiray mas'uulka guud ee katiibada Masina ee ka dagaalanta wadanka Maali.
Waziirada difaaca Faransiiska haweneyda lagu magacabo Florence Parli oo ka hor hadleysay Baarlamaanka xukumada Paris ayaa maalinkii Jimcaha ee lasoo dhaafay ku faantay in ciidankooda ka dagaalama wadanka Mali ay soo hooyeen guul la taaban karo, waxayna ma'suuliyiinta dowladda u xaqiijisay Dilka Sheikh Moxamed Kofa iyo 35 dagaal yahan oo isaga la socday, xilliga uu weerarku dhacayay.
Haweeneydan oo ay su'aalo dhowr ah ay weydiiyeen xildhibaannada Faransiiska ayaa ku adkeysatay dilka Sheikh Mohamed Kofa waxayna tiri "macluumad rasmi ah oo aan helnay ayaa inoo xaqiijiyay dilkiisa, tallaabada aan qaadnayna waxa ay ahayd guul weyn oo usoo hoyatay ciidanka iyo madaxda dalka faransiiska".
Wasiirka maaliyada ee dalka Faransiiska ayaa isna dhankiisa ka xaqiijiyey weerarka lagu dilay Sheikha wuxuuna warbaahinta u sheegay in camaliyadda lagu dilay wadaadkan ay ahayd mid muujineysa muhiimada uu leeyahay howlgalka saliibiga ah ee faransiisku ka wado dalka Maali kaas oo loogu magac daray Barkhan.
Faransiiska oo kaliya kuma sina dadka sheegay in hogaamiyahan daaciga ah lagu dilay duqeynta ka dhacday mandiqada Mopti ee dhacda bartamaha dalka Mali balse Madaxda iyo Sarakisha ciidanka ee xukumada Maali ayaa iyana warbaahinta u sheegay, in sirdoonkooda ay u xaqiiijiyen dilka Sheikhan iyo dhamaanba ciidankii la socday.
Hadal kasoo baxay Amiirka guud ee mujahidinta Al Qacida ee Magribul islam Sheikh Abu Muscab Cabdul Waduud ayaa lagu beeniyey dhamaanba sheegashada cadawga iyo beenta ay dadkooda u shegayan taas oo madaxda dalka faransiiska agtooda ka noqotay mid aan ceeb la ahayn.
Hadalkan ayaa hor u dhac u ahaa wareysi ay Mua’sasada Al Andalus la yeelatay Sheikh Moxamed Kofa, kaas oo ay baahisay Mu’asasada Al Zalaqa ee ku hadasha afka Jamacada Nusratul Islam Wal Muslimin, waxa uuna ku beeniyey sheegashada cadawga iyo warka kasoo yeeray wazaarada difaca faransiiska.
Sheikha ayaa Muuqaalkan Video ah kasoo muuqday isagoo isaga kala gooshaya deegaana kala duwan oo ku yaalla dalka Mali, isagoo dooni kaga gudbaya Webi halkaas ku yaala, isagoo ku sugan xero tababar oo dagaalyahanno Jihaadi ah ku suganyihiin iyo isagoo ku toog baranaya mid kamid ah mucaskaradka jihaadiga ah wuxuuna u muuqday mid ku naaloonaya nolosha raaxada leh ee Jihaadka iyo Dalxiiska oo uu Nabigena Muxamed NNKH noo sheegay in Jihaadka laga helo.
Wariyaha ka socday Mu’asasada Al Andalus ayaa sheikh weydiyey waxa uu kaga jawabayo hadalka kasoo baxay wasiiradda difaaca ee dowladda Faransiiska iyo isku dhex yaaca heysta madaxda military ee dowladaasi wuxuuna caddeeyay in marwalba dowladda Faransiiska sidaan oo kale uga been sheegto duullaanka ay Maali ku qaadday.
Sheikha ayaa sheegay in isku dhexyaaca heysta wasaaradda difaaca faransiiska mid lala yaabo taas oo sheegata in ay kamid tahay mu’asasaadk ciidan ee ugu awiidda badan adduunka, wuxuuna intaas ku daray in beenta ay sheegayaan aysan jirin cid ay ku khiyaani karaan maantana ay dadku ku nool yihin caalam furan oo dhawaqa qofka uu gaarayo meel aan la maleysan Karin.
Hoggaamiyahaan Jihaadiga ah ayaa sababta uu afar bilood uga aamusnaa warka ku saabsan dilkiisa ku sheegay in ay ogaanayeen sida uu udhaqmi doono Qabiilka uu kasoo jeedo oo caan ka ah Maali in ay cadowga ugarab raaricin doonaan iyo inkale wuxuuna sheegay in ay ogaadeen in qabiilkiisu yahay mid diyaar u ah jihaadka oo aan udheg raaricin ishaacaadkii cadowga kasoo yeeray.